Somalia:Dagaalka maanta ka dhacay Muqdisho,Baled Weyne,Baled Xaawo … | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > SOMALI NEWS, TFG Somalia	> Somalia:Dagaalka maanta ka dhacay Muqdisho,Baled Weyne,Baled Xaawo …
Muqdisho – Dagaalo is daba joog ah ayaa laga soo sheegayaa inay maanta ka dhaceen Magaalooyinka Muqdisho,Baledwyne,Buulo Xaawo iyo Waro Dhuumale oo ka tirsan Guraceel.
Warbaahinta qaarkeed ayaa sheegtay in ilaa 35 qof ay ku dhinteen tiro badan oo dhaawac ahna ay jirto,laakiin waxaan si sax ah loo hayn qasaaraha rasmiga ah.
Muqdisho: Dagaalo culus ayaa ilaa maanta ka socday oo qoraxdu isugu dhacday,Dagaalkaas oo lagu soo waramaya inay ku dhex mareen ciidanka Dawladda iyo AMISOM oo dhinaca ah iyo ragga ay iska soo horjeedaan ee Alshabaab.
Waxaana ka soo baxaya warar iskhilaafsan oo ku saabsan meelaha lakala qabsaday.
Waxaana lagu soo waramaya in maanta laysku helay jidka warshadaha,wasaarada Gaashaandhiga iyo meelo kale.
Warar kale ayaa sheegaya ilaa 15 qof inay ku dhinteen oo garabyadii is hayay ah.
Dawladda ayaa sheegatay inay meelo cusub ka qabsadeen alshabaab,Raga ay iska soo horjeedaanna nnin u hadlay xarakada Alshabaab ayaa wuxuu sheegay inay iska caabiyeen AMISOM na ay rag ka dileen ilaa 6 askari sida warbaahintu sheegtay,qasaaraha rasmiga ah ayaan si sax ah loo hayn.
Duleedka Baladweyne – ayaa isna dagaal culus kadhacay sida lagu soo waramayo,dagaalkaas oo ay iska soo horjeedaan Ciidanka Dawladda iyo Alshabaab oo gacanta ku haysa Baledweyne.
Buulo Xaawo– ayaa iyadana lagu soo waramaya in iyana meel kabaxsan magaalada uu dagaal culus kadhacay,dagaalkaas oo la sheegay inay isaga soo horjeedaan Dawladda iyo Ehlu sunno oo dhinac ah iyo Kooxaha Islaamiyiinta ee Alshabaab.
Waradhuumale ayaa iyana lagu soo waramayaa in galinkii dambe ee maanta uu dagaal ku dhex maray Ahlu Sunna iyo Alshabaab.
Tags: AFRICA, African Union, African Union Mission to Somalia, Al-Shabaab, conflict, Muqdisho, Transitional Federal Government
Somali troops seize rebel bases in Mogadishu: govt Buuhoodle:Dagaal is tuur tuur ah oo la ga soo sheegayo Colaadii Kalshaale